Tato anatin’ny 15 taona mantsy dia tsy nisy mihitsy ny fanamboarana ny tobim-piantsonana teny Ambodivona, hoy izy ireo ary tafiditra ao anatin’ny fanatsarana ny kalitaon’ny fifamoivoizana eto Madagasikara izao fifindrana mankeny amin’ny Gare Makis izao. Efa manana fotodrafitrasa mifandraika amin’ny fandraisana ireo fiara ireo ny eny Andohatapenaka, hoy hatrany izy ireo. Na dia misy amin’ireo mpandeha amin’ny lalam-pirenena faharoa sy fahadimy iny aza no manahy amin’ny mety ho fahasahiranana aterak’izay fifindrana izay dia maro ny tombontsoa. Tobim-piantsonana anjakan’ny tsy fandriampahalemana ny eny Ambodivona nandritra ny taona maro. Malaza amin’ny fisian’ny mpanao sinto-mahery sy ny tsy fanajana ireo mpanjifany ihany koa ankoatra ny tsy fahamarinam-potoanan’ireo mpitatitra. Azo antoka fa raha hafindra eny amin’ny Gare Makis Andohatapenaka ireo fiara ireo eto dia hisy amin’izay ny fanarahan-dalàna, hoy izy ireo.